Vhidhiyo yaDr Plandemic Judy Mikovits ndeye Chiitiko 201 mhando yemanyepo enhau musungo (vhidhiyo): Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 11 May 2020	• 30 Comments
kunobva: kubva kublue.info
Iwe unofanirwa kunge wakamuona, iyo documentary Plandemic yemukadzi ari Dr. Judy Mikovits anofona. Anonzi akambosungwa kwemazuva akati wandei akasungwa pasina kutongwa. Mushure mekusunungurwa kwake, anouya nemhando dzose dzekupokana nezveutachiona uye gomarara rekutapa iro Dr. Fauci anonzi akamboshandiswa mhosva yekutyisa vanhu.
Ndiani iye Event 201 kubva kuJohns Hopkins Institute, ziva kuti kurwisa manyepo enhau yaive chikamu chakakosha cheiyo coronavirus chirwere chefungidziro. Tiri kubatwa.
Nzira yakanaka yekupedzisira yekuuraya vanopikisa ndeyekutanga nyaya yenhema inotaridzika kuva yakashata uye yakavimbika, nekuti mutambi anotungamira anongouya nenyaya "yakanaka yekurira". Asi parizvino Forbes iri kuisa mukati ichi chakawanda chinyorwa Mikovits angave an anti-vaccine activist. Izvi zvinogona kuve zvechokwadi, asi zvinogona zvakare kuti mukadzi uyu ari pamubhadharo waBill Gates kuti aite izvo zvandakakurukura kakawanda pano: tamba yakadzora oppoisition (anoita).
Panyaya yekushora inodzora, mabhomba anogara akavakirwa mukati meviri pasi. Ini zvino ndinonzwa iwe uchifunga:Ah, Vrijland, siya kupokana kwako kwakadziviswa!“Ndine urombo kwazvo, asi waona chero humbowo hwechokwadi hwakaratidzwa - kunze kwegumbu rako richinzwa kutsamwiswa? Kwete? Izvi zvinofanirwa kukutyisa. Iwe unofanirwawo kushamiswa kuti mukadzi wacho anotogamuchira yakawanda ye media uye yekushambadzira midhiya kutarisirwa.
Kunyanya, iyo mimwe midhiya inosimudzira inofunga uye iwe unogona zvakare kuona vhidhiyo iri kugoverwa nechido paFacebook nemamwe midhiya enhau. "Zvakanaka, chii chiri kunetsa neicho?"Hapana chakashata nezvazvo, dai zvisiri kuti ndanyevera kazhinji nezve kuvapo kweumwe." mauto makuru enhau. Uye kana uto iro rinogona kubatsira kumisa iwe, ivo vanofara kuita saizvozvo. Kana iko zvino kuratidzwa kwepenini kwakadzorwa uye zvikapupurwa nezvazvo, ivo vanogona kukurova.
Chikamu cheChiitiko 201 simulation ndechekuti nhau dzenhema dzinofanira kusanganiswa. Unogona sei kurongedza izvi zvakanaka? Nekutanga nhau dzenhema uye kuongorora kugoverwa kwayo (Big Data) uye nekuyera chaizvo miganho uye kuona kuti ndiani anoita kana asingaite kwairi. Iyo Big Data masystem anokwanisa kuyera mhinduro yako uye kutarisa mafambisirwo anoenderana nemafoni ako uye kutariswa sensors kubva pafoni yako (otomatiki kuburikidza neAI zvinyorwa).
Tave kupupuririzve iyo njanji yekuchengetedza njodzi, uko vatsoropodzi vakawanda sezvinobvira vanofanirwa kukwezverwa mumusungo, kuti ivo vobva vataura "Ini handitendi chero chinhu - kana chisingabvi munhepfenyuro".
Source chinyorwa listings: forbes.com
IQAnon kuchengetedza net: PsyOp yakachenjera kuti uongorore vanofunga
Kudzokorora: 5G uye corona haina chekuita nemumwe!
Tags: 201, yakanakisisa, inodzorwa, Dr., chiitiko, nyepera, Fauci, Featured, inodzorwa, Judy, Mikovits, nhau dzakaipa, nhau, kushorwa, kushorwa, Denda, ari, Video, nzira
11 May 2020 pa 15: 20
Chii chinonzi 'mikovits' CV? Iye anonzi Mikovits chaizvo here?
Ipapo ndoziva zvakakwana zvangu. Vanogara pakati, anotyisa!
11 May 2020 pa 17: 45
idd mikowitz, kaufman… regai nditaure zvakawandisa
11 May 2020 pa 18: 15
11 May 2020 pa 15: 26
Zvinonzi kumhanya bhowa asi akangwara chimiro hondo. Ini ndaimbove netariro yekuti Q (naTrump) zvechokwadi vaizodzinga dunhu rakadzika. Nekuti ndakazivisa ichi ichokwadi, asi zvakazova disinfo, ndakawira mumusungo zvachose uye zvinoreva kuti chese chandinotaura ikozvino chinosekwa chose. Saka zvakakosha kwazvo kunongedzera vanhu vari kungomuka kuenda kumugodhi we disinfform.
Ndinofunga Andrew Kaufman akatendeka, ndinovimba handisi kukanganisa zvakare…
11 May 2020 pa 17: 11
Tine urombo, asi zvese zvaunoda kuti uzive nezvekugadziriswa kwepaini gene zvakatsanangurwa zvakanyatsojeka muzvinyorwa zvinoverengeka pano pawebhusaiti, saka haufanirwe kuendesa muverengi kune dzimwe nzira uri wega. Iwe hauzive kana iro ruzivo rakasanganiswa ne disinfo.
Zvose zvaunoda kuziva:
11 May 2020 pa 17: 25
Andy Kaufman anotsanangura mune yechipiri kubatana chaizvo kuti mavhairasi akasiyana nemaitiro ekunze ekunze utachiona. Germ vs terrain thecy. Hutachiona hadzina kumbobvira dzakaparadzaniswa, kunyangwe hutachiona uhu, iyo miedzo haina kurasika, etc. Kunyangwe kubatanidza kune yeCRISPR gene editing tekinoroji inotsanangura zvese pamusoro pechirwere, nezve izvo chaizvo hutachiona, Kaufman ine basa. Kunze kwekunge iyewo ari disinfo mumiririri, asi handifungi kuti akadaro.
11 May 2020 pa 17: 48
Zvakanaka chaizvo, ndobva ndazoidzidza
11 May 2020 pa 19: 34
Ini ndinofunga kuti wagadzirira munguva pfupi, zvinosuwisa. Inosanganiswa neawa maviri London Chaizvo bvunzurudzo. Saka zvinoita sekunyepa kwandiri. Inoramba ichitsamwisa. Nekuti anoratidzika kuva anogutsa.
11 May 2020 pa 23: 06
Björn Eybl Yemweya Zvinokonzeresa Kurwara yakavakirwa pamirairo yaDkt Hamer yekuzvarwa yezvisikwa inodzidziswa naBiologika Nederland. Iri bhuku rinotaura zvinotevera nezveutachiona, furu uye zvinetso zvekufema (chiratidzo chinotyisidzira chehupenyu hwekorona maererano nemushonga mukurumbira).
Nanhasi, hapana hutachiona hwaonekwa zvakananga. Mavairasi anotaridzirwa zvisirizvo nekusunga kana kusasunga kwemapuroteni kune mamwe mapuroteni. Iko hakuna humbowo hwakazara hwekuti mavairasi anonzi anokonzera chirwere. Pasina mubvunzo, huwandu hwakakura hweprotein complements (globulin) inowanikwa muropa uye mamwe mvura yemuviri. Aya ma globulins akafanana neanonzi 'mavhairasi'. Iyo cerebrum inogona kushanda nemapuroteni aya kuvaka zvakare yakakanganisika ectodermal tishu muchikamu chekuporesa.
Mune mushonga wenguva dzose, mutsauko unogadzirwa pakati 'panjodzi, flu chaiyo' uye 'flu risingakuvadze'. Seve syndromes dzinoonekwa se 'flu chairo', maitiro akareruka anodzingwa se'kurwara nechirwere 'kana' kutonhora '. Kubva pakuona kwemitemo yemasikirwo echisikigo, isu tinongofunga nezvezviratidzo zvevarwere:
Kurwadza kwemaronda = kuzvishingisa kukakavara, chikamu chekuporesa
Kazhinji kutonhora = kunhuwa kana kwekunhuhwirira, chikamu chekuporesa
Kuruma pahuro = kusada kumedza kana kupfira chinhu, chikamu chekuporesa
Larynx = kuvhundutsa kana kutaura kusawirirana, chikamu chekuporesa
Nguruve, nguruve, uye furu nyowani ndeye WHO-yakagadzirirwa 'nhandare'.
Mune 'zvakanyanya chirwere chefuru', senge denda, mishonga yakajairika inoshandisa marapirwo akadai saTamiflu kana Relenza (cell respiratory blocking chemotherapies), vaccinations, pamwe nekuwanda kwe hypnosis.
Kunetsana: Territory Kunetseka Kunetsekana (munhurume anoshanda, kurwisa) kana Terror Kutya Kuvhiringidzika (mukadzi kungosvika, kubvisa). Izvi zvinoenderana nehumwe, huwandu hwehomoni uye kupokana kwapfuura. Vanhu vanotya kurasikirwa nharaunda yavo (semuenzaniso shamwari kana basa) kana nzvimbo munzvimbo (semuenzaniso chinzvimbo kana chinzvimbo).
Tissue: Bronchial uye Windpipe mucosa, mundiro epithelium, ectoderm
Kunetsana Kunoshanda: Cellular depletion yebronchial uye trachea mucosa, kazhinji isingatariswe.
Biological pfungwa: Muchinjikwa-chikamu chinowedzera dhayamita. Semhedzisiro, mweya iri nani uye yakawanda inokwanisa kuvhiringidzwa uye kufuridzwa kuti vadzivirire ndima yacho zviri nani.
(Mumhuka, kushandisirwa kwomuzvarirwo kunonzwisisika. Muvanhu kazhinji kazhinji kwete nekuti kukonana kwedu kunowanzoita kwepfungwa uye nekudaro kugadzirisa kwezvakazvarwa hakuna zvazvinoreva. Zvisinei, muviri wedu unosangana sezvakangoita mhuka.Huropi hwedu haazivi mutsauko pakati pekupokana uye kwepfungwa. )
Kuporesa chikamu: Kuvakwazve kwebronchial mucosa nekuzvimba ichikonzera kusimba pachipfuva kunogona kuperekedzwa nekukosora nefivha.
Kunetsana kuri pamusoro kunogona kukonzerwa nemishumo yenhau uye nhanho. Nekurerutsa matanho, idzi nyonganiso dzinogona kugadziriswa uye vanhu vanogona kurwara.
Pamwe zvese zvirwere zvinomuka kubva mukati kunze kuburikidza nekunyongana kwepfungwa izvo zvinokonzeresa gadziriso yemuviri (kuwedzera kana kuderera kwemasero kana kurasikirwa kwebasa). Izvi zvinogadziriswa zvinogadziriswa nerubatsiro rwemweya-zvipenyu (fungi uye fungal mabhakitiriya anoputsa maseru, mabhakitiriya uye 'mavhairasi' anovaka masero) ayo anogadzirwa nemuviri wedu. Kunze ndidzo: chepfu (semuenzaniso chikafu chepfu), mechanic (semuvhuna kutyora pfupa) uye genetic (semuenzaniso Down Down). Pamwe chete kuva nechirwere kuri kukonzerwa nekunetsana kwakabatana kusangana. Matanho acho haabatsiri nekuti kusvibiswa sezvatinodzidziswa hakuna kunaka. Matanho acho ari kukuvadza nekuti anogona kukonzera kupokana saka chirwere. Vaya vari musimba vanoda kuti tidavire kuti hutachiona uye chirwere chinobva kunze uye kuti isu tine immune system ine memory yekuparadza hutachiona hunopinda. Izvi zvinovatendera kuti vape mhinduro yekunze. Iyo yekudzivirira nayo yavanoda kusanganisa vanhu neArtificial Intelligence.
12 May 2020 pa 11: 08
Iro bhuku rakanyorwa pamberi kana mushure meCRISPR tekisiti kuwanikwa? Nekuti izvo zvinotitendera kuti titarise zvishoma zvakanyanya padanho reDNA neRNA.
12 May 2020 pa 11: 43
Iro bhuku reSports Inokonzera Zvirwere rakaburitswa muna 2010.
Dr Hamer vakawana mitemo yemhando yezvisikwa mukupera kwema70s.
Ini ndinoshamisika kuti zvine basa here kana iyo CRISPR tekinoroji kuwanikwa zvichienderana nemutemo zvinyorwa. Vanenge ruzivo rwese rwunotariswa. Zvichida nzira iyi yaivapo kare kupfuura hurukuro yepamutemo.
12 May 2020 pa 13: 53
@Martin, inonakidza yekudzidza kunyanya nezve RNA / luciferase. Ini ndinobheja ichi chikamu chechiratidzo chitsva. Nehurombo ini handisi kuona iyo yakazara kuongororwa, inoda mari.
Iyo incPRINT (in-cell protein - RNA yekudyidzana) inokunda matambudziko aya nekushandisa yakarondedzerwa yakamuratidzwazve luciferase yakamisikidzwa kune MS2-yakamakwa RNA yekufarira kuburikidza neMS2 jasi protein (MS2CP) . Kana kuwirirana pakati pekuyedza RNA neprotein yekuyera kukaitika muchitokisi, chinoyerwa neye luminescence ichitevera cell lysis uye immunoprecipitation yepake tag yakadzvanywa.
12 May 2020 pa 16: 16
+ Chiedza chakasvibirira 🤔hmmmm
GreenLight Biosciences inokwidza $ 17m kukanda mRNA kugadzirwa kweCOVID-19 yekudzivirira mukwikwidzi muyedzo
Luciferase izita rinozivikanwa rekirasi yeannyanzvi enzymes inowanzo kukonzera bioluminescence mune zvakasikwa. Iro zita rinobva kuna Lucifer, zvinoreva kuti "mutakuri wechiedza". Muenzaniso unozivikanwa kwazvo luciferase kubva kune glowworm Photinus pyralis. Mune luminescent reaction, chiedza chinogadzirwa neiyo oxidation ye luciferin (pigment) uye adenosine triphosphate (ATP).
12 May 2020 pa 18: 14
sezviri pachena inoverengwa naSalimoni.
nyuchi akanyora kuti:
14 May 2020 pa 20: 51
Iro bhuku reMweya Zvinokonzera Kurwara rinogona kurodha pachena pasina E-bhuku kubva kumushanduri: https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/
Marcel Korver akanyora kuti:
11 May 2020 pa 16: 17
Ndokumbirawo mupe rumwe ruzivo rwemashure nezve chirevo chenyu maererano naDr. Judy Mikovits, nekuti iye chapupu chakakosha zvikuru maererano nehuori mukati meindasitiri yekuchera vanhu uye kazhinji aine vamwe vanhu vazhinji vakadai saRobert F. Kennedy, Del Bigtree, Dr Andrew Wakefield, avo vese havazive kuti iye nyaya haisi yechokwadi !!!!
11 May 2020 pa 17: 06
Asingazive izvi kuti nyaya yake haisi yechokwadi kana kuti mutinhimira anonyatsoziva kuti nyaya yacho haisi yechokwadi, asi batsira kuzadza mambure ekuchengetedza echikepe chikuru chekuchengetedza chikepe kuti inyure icho chikepe chose, kuti misasa yekudzidzira igozadzwa kana zvino vanhu achafunga, "Zvakanaka chiregera kutsoropodza avo, vachaziva nani"
12 May 2020 pa 08: 21
Zvino iyi ndeyeti hukuru hwekuchengetedza nekuti Robert F. Kennedy anga achishanda kwemakore uye Del Bigtree weHighwire chaiye akaita basa rakanaka. Ehe isu tinogona kubvunza zvese, asi mhedzisiro yebasa ravo seVaxxed ndeyechokwadi kuti mamirioni evanhu akaisa chiratidzo.
Kana iri zvakare mambure ekudzivirira, saka iyi ndeimwe yehukuru hukuru.
12 May 2020 pa 11: 11
Ini ndinokubatsira tariro haizi, asi ngatigarei takamuka.
11 May 2020 pa 17: 14
Pfungwa iwe, handisi kutaura kuchengetedzeka net pawns haigoni kutaura chokwadi. Uyewo, Handisi kuti ndiri aifarira-kubaya. Zvandiri kutaura ndezvekuti nzira yekuchengetedza njodzi kazhinji ndiyo iya 'yekutsungirira nezvokwadi', asi kuti pane bhomba mune yakapetwa kaviri.
Muiyi sketch vhidhiyo ini ndinotsanangura:
12 May 2020 pa 08: 22
tichaona kana paine zvakapetwa kaviri kana kwete ... ngatiregei tariro
Gerke Teitsma akanyora kuti:
11 May 2020 pa 18: 10
mukadzi uyu anoti anosanganisira hutachiona hweHIV. ari oga .. izvo zvinoshamisa kwazvo. zvakare kufungidzira kuti aifanira uye akachengeta muromo wake asi iye zvino akangoerekana abvumidzwa kutaura.
11 May 2020 pa 19: 50
Kwechinguva, ivo havana hanya nezvechokwadi kana chokwadi. Izvi hazvina kukosha. Kana vaine chero chokwadi kana chokwadi zvachose, zvinongoda chete kuvanza kutendeka kwavo kubva kuShumba yavo. Chinangwa chikuru chinobva kuHen, Kuvhiringidzika, sewe
vanhuwo zvavo Vakavhiringidzwa, havacharangarira zvekutenda, izvi zvinomisa hura hwevanhuwo zvavo, ivo nhapwa. Munhu akaoma mitezo haaite chinhu uye anongoita zvinhu. Ndizvozvo chaizvo zvavari Kuda. Ikoko Kuvhiringidzika kuri nani kwavari nekuti Vanogona nguva dzose kutendeukira shure vozosiyiwa zvakadaro.
Ndokusaka iwe uchiwanzoona vakomana vakati wandei ve script vanotaura izvi, mumwe mukomana anodaro uye mukomana iye akadaro kudaro etc.
11 May 2020 pa 20: 17
Chaizvoizvo .. imo fomu yekufungidzira ... "ndinga tarise kupi, musoro wangu unovhiringika"
Izvo chaizvo apo pfungwa yako yepasi rose inogona kurongwa.
12 May 2020 pa 13: 02
Musoro wawaiziva uchiuya, wakasimba kwazvo.
Wese munhu anotizira kune bitchute, iyo Pied Piper yeHammering anopindura mukati meawa kana chimwe chinhu chisina kunaka nekukanda kwaunoita. (sei ipapo?)
Kune uto rese rinozokushandira zvakanaka!
Manheru ano ndinorovera maoko angu pamhanza kune imi mose pamusoro!
W Hörchner akanyora kuti:
12 May 2020 pa 13: 24
Nayo pachayo, chinyorwa chaForbes chinogonawo kutaridzwa sekuparadzira. Zvese zvaunoverenga iwe unofanirwa kutenda kana kuvimba kuti zvive zvechokwadi. Kana iwe ukaverenga kuburikidza nemamwe mareferenzi zvakaoma kuona kana chokwadi chiri kunyorwa kana kwete.
Semuenzaniso, zvinotaurwa kuti angadai akazvizivisa pachinzvimbo chekusungwa (kumba). Kana iwe ukatsvaga pa google iwe uchawanawo zvinopesana nhau.
1) https://abcnews.go.com/Health/Wellness/chronic-fatigue-researcher-jailed-controversy/story?id=15076224 anonyora kuti akanyoresa paChipiri.
Ichi chinyorwa chenhau chakaparurwa musi waZvita 2, 2011.
2) https://mynews4.com/news/local/judy-mikovits-turns-herself-in anonyora kuti akanyoresa paMuvhuro.
Chinyorwa chenhau chakabudiswa munaNovember 29, 2011. Vhidhiyo yenhau yacho anobva aratidza kuti akaburitswa zuva rimwe chete, izvo zvisiri zvechokwadi nemimwe mishumo yekuti anga akavharirwa kwemazuva akati wandei.
3) https://www.sciencemag.org/news/2011/11/controversial-cfs-researcher-arrested-and-jailed Sheriffs muVentura County, California, akasunga Mikovits nezuro achipomerwa mhosva yekuti ndiye mupoteri kubva pakutongwa.
Chinyorwa ichi chakaburitswa Mugovera, Nyamavhuvhu 19 (Mazuva gumi ezvinyorwa zve mynews10).
Nezuro kwaizove kuchiri Mugovera 18. Zvichiri zvakasiyana kubva kune mbiri dzakapfuura mameseji. Ini handigoni kuziva kana paine zviitiko zvakati wandei senge kusungwa wobva wazvitaurira uchidaro.
Chinyorwa chiri mubookencemag.org (https://www.sciencemag.org/news/2020/05/fact-checking-judy-mikovits-controversial-virologist-attacking-anthony-fauci-viral#) mukupindura zvakataurwa naMikovits:
Mikovits: Ini ndaive gamba mujeri, ndisina mhosva.
Gweta redunhu muWashoe County, Nevada, akamhan'arira Mikovits mhosva yaakapara akamupa mhosva yekutora zvisiri pamutemo zvemakomputa uye nepfuma yakaenderana neWPI. Mhosva dzakadzingwa, muchidimbu nekuda kwedambudziko repamutemo rakatarisana newaaimboshandira.
Muchinyorwa chepfungwa 3 inoti, pakati pezvimwe zvinhu:
'' Mutauriri weWashoe County Sheriff's Office akaudza ScienceInsider kuti haina kuburitsa waranti, kana Reno kana Spark department. Akataura kuti inogona kubva kune imwe yemasangano emubatanidzwa muWashoe County. '
Izvo zvinoita kunge zvisina kujeka. Uyezve, kubva pamaonero ake (uye mhosva dzakadonhedzwa pava paya), akasungwa pasina mhosva. Ini handifunge kuti chinzvimbo chakadai chinoshamisa. Mu "firimu" iye zvakare anoratidza kuti zvakanangana nekuba kwezvinhu.
Izvo zvakare zvakaneta kutaura kuti mifananidzo yemasheya uye / kana firimu rezvikwata zveSEAT rakashandiswa izvo zvisina chekuita nekusungwa. Izvi zvinoitika pamutsetse wekereke mune midhiya. Cheka, pasika uye yakagadzirwa muhupenyu. Uye zvese zvaunoona uye / kana kuverenga munhau zvinangwa kukupa imwe manzwiro. Izvi ndozvakaitawo zvirongwa zvakaita seZembla uye kunyangwe iyo Valuation Service. Onawo mufananidzo uri kumusoro kwechinyorwa cheForbes. Kana izvo zvikasaitirwa kugadzira manzwiro ...
Kuongorora chaiko, kukonzeresa ... mazwi ekuumbwa anoshandiswa kureva kunyora kana kutaura chokwadi. Sezvo se'anofunga wekufunga 'iri bhokisi iro raanopa mhosva isina kunaka. Zvese zano.
Ndinotenda kazhinji kufunga kwedu kwakavakirwa pakutenda, kuvimba uye kuvimba. Chii chiri chokwadi kune imwe, imwe yacho inofanira kufungidzira sechokwadi. Uye chii chinonzi kurangana zano kune mumwe munhu chokwadi kune mumwe. Chii chinonzi huchenjeri kune mumwe munhu wakapenga kune mumwe.
17 May 2020 pa 05: 07
W Horchner, ndinokutendai nekuda kwehukama hwako uye zvaunotaura.
Ini zvakadaro handisati ndotarisa zvinongedzo asi ndinogona kutoona kuti iwe unoziva mafambiro anofamba.
12 May 2020 pa 15: 54
ikozvino dzimwe nyaya dzakakomba, nerombo rakanaka Greta apora zvakare KUCH😷
12 May 2020 pa 19: 06
Heino kusimbiswa kwechikamu chakakura icho Martin anga achidana kwemakore. Uye chakanyatso kusimbiswa iri kumagumo, iyo bhaisikopo inotora maminetsi gumi nemashanu, asi yekupedzisira maminetsi matatu ndeyevose vanoverenga uye vanobatana nenyika IMBers vanoti bye bye, vachipokana nezvaunofunga kuti unazvo izvozvi. Ah hongu kune zvakare yako mhuri. Nekuti zuva rimwe chete rave risinganzwisisike vatenzi vako. Uye ipapo iwe unongova neramangwana sevamwe vese. Zvimwe murume uyu anokupa imwe nzwisiso. Kunyangwe zvisingaite, nekuti wakanamatira pawebhu rako. Martin iwe uri mumwe wevashoma vanorwira rusununguko chairwo. Ndatenda nekuita kwenyu kose. Kunyangwe ivo IMBers vachiri kufunga kuti ivo magamba evatenzi vavo. Zvese zvinopera.
17 May 2020 pa 04: 59
Heano mamwe data kubva kuna Tony Heller;
« Kurwisa kukuru pawebsite Martin Vrijland, asi isu tichapfuurira!
Nguva yekuchinja kukuru uye huru shanduko: saina chikumbiro »
Kushanya kwakazara: 2.484.606